Ogaden News Agency (ONA) – Caalamka Jazeera : Soo Noqoshadii Tataarka Qirim – Filim Tiiraanyo Leh
Caalamka Jazeera : Soo Noqoshadii Tataarka Qirim – Filim Tiiraanyo Leh
Wuxuu caalamka ku waabariistay 16kii Marso 2014 afti la yidhi dadkii daganaa Jasiiradda Qirim (Crimea) ayaa lagu weydiiyay inay ka mid ahaanayaan Ukraanya ama ay ku biirayaan Fedreaalka Ruushka. Cod diibashadaa ayaa waxaan ka qabyb qaadan qawmiyadda Tataarka oo gaadhaya 300,000. Dad badan ayaa isweydiiyay sababta 12% dadkii daganaa jasiiradda ay u diideen inay codkooda dhiibtaan, inkastoo aqlibiyadda meesha dagan oo Ruush ah ay u codeeyeen inay ku biiraan Federaalka Ruushka.
Hadaba filim Dokumentry ah oo Jazeera laga daawanayo maalmahan ayaa lagaga xog waranayaa inay ahaayeen Tataarku dadkii asal ahaan u daganaa Jasiiradda Qirim (Crimea), hasa ahaatee uu 1944kii si xoog ah uga wada rarary dalkoodii K/taliyihii xukumay Ruushka/Sofyetka dagaalkii 2aad ee aduunka Joseph Stalin. Wuxuuna ugu marnarsooday inay khiyaano sameeyeen oy lasoo safteen Jarmalka intuu dagaalka socday, taasoo sida aad ka daawan doontaan filimka ahayd waxaan jirin, sababtoo ah xaasaska laga raray dalka waxaa ka mid ahaa qaar badan oo ragoodii ay ku maqnaayeen goobaha dagaalka oo ciidanka Ruushka ee dagaalka kula jira Jermalka ka mid ahaa.
Gabadha qortay filimka Orye Edimofa oo 7ba jir ahayd waqtigaa ayaa waxay ka sheekenaysaa sida naxariisdarada ah ee askartii Ruushka ay ula dhaqmeen dadkii Tataarka ahaa. Waxay sheegtay in aabaheed uu ku maqnaa dagaalka isagoo ka mid ahaa ciidankii Ruushka markii reerkiisa laga rarayay dalkoodii. Waxay sheegaysaa in (18kii May 1944) ay askartii Ruusha soo jabiyeen gurigoodii oy ku yidhaahdeen; “Soo baxa Tataar .. khaa’imiin ayaad tihiin. Waxaan go’aansanay in la’idinka raro dalka”. Waqtigaa waxaa gurigooda ay ku daweynayeen askar Ruush ah oo dagaalka ku soo dhaawacantay, kuwaasoo aad ula yaabay dadkii u dagaalamayay difaaca Ruusha ee guryahooda ku daweynayay in la yidhaahdo khaa’imiin ayaad tihiin oo dalkoodii laga rarayo.
Habeenkaa ilaa 200,000 ayaa laga soo ururiyay jasiirada Qirim waxaana la’isugu keenay 5an meel oo tareenada laga raaco halkaasoo ay ku sugayeen 67 tareen. Gabadhan hooyadeed iyo kumanaan kale ayaa jidkii dheeraa kusii dhintey.
Filimkan waxaad ka arkaysaa sida naxariis darada ah ee shucuubta la gumaysto loola dhaqmayo oo dalkooda looga rarayo, iyagoon loo kala aaba-yeelin mid la socda oo taageersan xukunkooda iyo mid kasoo horjeeda. Dadkii la barakiciyay oo qaarkood kusoo noqday guryahoodii laga qaatay oo isku dayay inay xaqoodii raadsadaan ayaa loola dhaqmay si waxashnimo ah, waana dadka diiday inay ka qaybqaataan aftida iyagoo ka xun sidii loola dhaqmay awoowyadood oo dalka looga raray kadibna loo dajiyay dad laga keenay gobolada kale ee Ruushka.